Isitholi sezimoto eziqashisayo - imoto yakho nge-BEST PRICE?
Udinga imoto yokuqasha? Ngemuva kwalokho usufinyelele ekhasini obukade ulifuna. Sebenzisa yethu othole ukuqasha imoto futhi uthole eyodwa ngentengo engcono kakhulu nangazo zonke iziqinisekiso ezikhona.
Injini yokusesha yokuqasha imoto
Ngaphezulu kwale migqa uzothola injini yethu yokusesha enamandla ezokusiza ukuthi uyithole intengo engcono kakhulu iqinisekisiwe. Ukuyisebenzisa kulula kakhulu, mane umane ufake indawo oyothathwa kuyo, umake izinsuku ozothathwa ngazo bese ubuya futhi kuzofanele useshe futhi uzoba nokunikezwa kwemoto yokuqasha engcono kakhulu ezandleni zakho.
1 Injini yokusesha yokuqasha imoto
2 Qasha imoto
3 Izinzuzo zokuqasha imoto
4 Qasha imoto online
4.1 Izimoto Zokuqasha
5 Isebenza kanjani injini yokusesha izimoto online
6 Ngingakwazi ukuqasha imoto ngaphandle kwekhadi lesikweletu?
7 Ngabe kusebenza kanjani ukuqashwa kwemoto phakathi kwabantu ngabanye?
Okunye kokukhathazeka okuqubuka kakhulu lapho sihlela uhambo lwethu, ikakhulukazi uma lusezingeni elikhulu, yilokho okufanele sikwenze uma kwenzeka sinezinkinga ezinkulu ngidinga ukwenza imizila yobunzima obuthile noma uhambela amanye amadolobha.
Abaningi babalekela ukusetshenziswa kwezithuthi zomphakathi, kungaba ngenxa yokuntuleka kwenduduzo nenkululeko ngokwamashejuli, njll. ukuthi lokhu kusho, noma ngenxa yokwenyuka abakukhiqizayo kuzindleko eziphelele noma isabelomali. Kodwa-ke, ukuhamba ngezimoto zethu akuhlali kwenzeka ngaso sonke isikhathi, kulapho umqondo we izimoto eziqashisayo.
Kungenzeka ukuthi ekuqaleni, ukuqasha imoto kuwumsebenzi onzima, kepha akukho okuqhubekayo eqinisweni. Okulandelayo, sichaza futhi sikusize ukuthi ukwenze kanjani. Futhi uma ufuna ukuthola intengo eshibhile kufanele uchofoze lapha.
Izinzuzo zokuqasha imoto
Ukuthatha isinqumo sokucela imoto eqashisayo ohambweni lwakho kungaba nezinzuzo ezinkulu:
Libertad amashejuli wokuhamba nokuhamba.
Hlela imizila kuya ngezidingo zakho.
Ilondoloza, ngoba ukuqasha imoto, uma kungeyona imoto ephezulu, kungaba nentengo ephakathi kuka- € 5 no- € 15 ngosuku. Kodwa-ke, uma singakhetha ezokuthutha zomphakathi, leli nani lizoba ngaphezulu kakhulu.
Ukwazi ukuphatha i inani elikhulu lemithwalo.
Qasha imoto online
Njengamanje, kunethiwekhi sithola izinkampani ezahlukahlukene ezinikezelwe ekuqashweni kwezimoto ezisinikeza ithuba lokucela izinsizakalo zazo ngokuphelele online. Kepha le nto ayigcini lapha, kepha sinenye inketho enjengamakhasi e-web ahlukile asinikeza izinjini zokucinga ezilandelela phakathi kwama-franchise ahlukahlukene anikezelwe kulo mkhakha ukuze asibonise amanani amahle kakhulu.
Phakathi kokuvelele kakhulu, sinakho:
I-RentalCars yipulatifomu ekuvumela ukuthi uqhathanise bonke abahlinzeki benkonzo yokuqasha izimoto ukuthola isilinganiso esishibhile. Ukuyisebenzisa kulula kakhulu, nje kufanele uchofoze lapha, Qedela yonke idatha futhi manje ungayibekisa imoto yakho yokuqasha ngentengo engcono kakhulu.
Ibhajethi yasungulwa eCalifornia, ikakhulukazi edolobheni laseLos Angeles, ngo-1958. Yaqala njengebhizinisi elincane lomndeni elinezimoto eziyi-10 kuphela eziqashisayo.
Namuhla, inezimoto ezahlukahlukene, amaloli namaveni, ngaphezu kwenani eliphelele le- Amahhovisi angama-3.400 atholakala emazweni ayi-128.
Inkampani ekhethekile ku- ukuqashwa kwezimoto eYurophu uneminyaka engaphezu kwengu-60 yesipiliyoni futhi uthenjiwe ngamakhasimende angaphezu kwezigidi eziyisithupha ngo-2014. Ungathola ukunikezwa kwabo ngokufaka lesi sixhumanisi.
I-Sing.es iyisevisi eku-inthanethi enikeza ukuqashwa kwezimoto kulo lonke elaseSpain nakwamanye amazwe angaphezu kwangu-105 emhlabeni wonke. Futhi manje ungabhuka ngesaphulelo esingu-10% sibonga i-AbsolutViajes ngokuchofoza lapha. Ngabe uzolahlekelwa yithuba?
Namuhla, lapho izinhlelo zokusebenza sezibe yithuluzi elibalulekile lokwenza izimpilo zethu "zibe lula", kuvela iKAYAK, inhloso yayo ukusinikeza isandla lapho sihlela uhambo lwethu oluhle kuqhathaniswa amanani ahamba phambili phakathi kwamakhasi e-web ahlukile. Futhi-ke, futhi kusinikeza nethuba lokuthola imoto eqashisayo evumelana kangcono nezidingo zethu.
Umuntu ngamunye unokuthanda kwakhe, yingakho i-Avis isinikeza indlela ye- izimoto ezinkulu zazo zonke izinhlobo: kusuka ezimotweni ezilula kuya ezinamandla nokunethezeka. Ibuye isinikeze njalo izaphulelo ezahlukahlukene njalo. Inketho yokuhlala ukhumbula njalo, nayo Manje usunokunikezwa kwezinsuku ezi-3 ngentengo engu-2 ngokuchofoza lapha.
Isebenza kanjani injini yokusesha izimoto online
Noma ngabe sibheka injini yokusesha eqhathanisa amanani phakathi kwezinkampani ezahlukahlukene zokuqasha izimoto noma uma kuyinjini yokusesha yenkampani ethile, ukusebenza kuhlala kufana.
Kubo siyikho sizokhombisa isikrini ngamabhokisi ahlukahlukene nezinketho okufanele sizigcwalise. Okokuqala, kufanele sikhombise indawo lapho sinentshisekelo yokulanda khona imoto. Kamuva, sizokhombisa izinsuku zokuqoqwa kanye nokulethwa okufanayo. Ekugcineni, kufanele sinikeze imininingwane ngohlobo nezimpawu zemoto.
Kumele kuqashelwe ukuthi, kuya ngenjini yokusesha esetshenzisiwe, siyaphoqeleka ukuthi sinikeze ezinye izinhlobo zolwazi. Kodwa-ke, lezi zidingo ezicashunwe ngenhla yilezo ezibonakala njengomthetho ojwayelekile kumafomu okusesha, futhi amandla okuguquguquka ngokuvamile njengoba kuchaziwe.
Ngingakwazi ukuqasha imoto ngaphandle kwekhadi lesikweletu?
Izinkampani eziningi zinqena kakhulu ukuvumela ukuqashwa kwemoto ngokusebenzisa i- inkokhelo yemali, kepha kudinga i- ikhadi lesikweletu ngakho. Ngakho-ke, kungaba yinto engenakwenzeka ukuthola imoto yokuqasha ngaphandle kwalolu hlobo lokusebenza.
Isizathu sokwenqaba imali esandleni silula. Izimoto ziyabiza, kunzima ukuzinakekela futhi, ikakhulukazi, ziyakujabulela ukulungiswa kwezinye izimo ezingabiza kakhulu. Yingakho izinkampani kumele ziqinisekise ukuthi izimoto ngeke zilimale ngenxa yamakhasimende, futhi uma lokhu kungafezeki, kufanele zizame ukuzinciphisa ukuze zingalahleki ngokomnotho. Ngale ndlela, ziyakha umshuwalense okunamathiselwe kokuqashwa kwemoto.
Le mishuwalense igcinwa idiphozi ngendlela yemali ezonikelwa kuphela iklayenti uma kunesidingo (ukuwohloka kwemishini, ukwephuka, ukushaywa, njll.). Ngamakhadi esikweletu kulula ukudala lolu hlobo lwediphozithi, "ukuvimba" inani elithile esele esele "elizokhishwa" lapho kudilizwa imoto.
Yize, njengoba konke lokhu kuphila kuguquka, lesi simo besingeke sibe sincane. Kakade emadolobheni amakhulu amakhulu kunezinkampani ezizimisele ukuqasha izimoto zazo kithi ngokukhokha imali. Ukuhamba nge-inthanethi kuyinkimbinkimbi ngokwengeziwe, kepha sekukhona amacala athile afana ne-AutoEurope.
Ngabe kusebenza kanjani ukuqashwa kwemoto phakathi kwabantu ngabanye?
Ezikhathini zamuva nje, ukuqashwa kwezimoto kube nezinguquko. Ziyanda izinkampani ezinganikeli ngezimoto zazo, kepha zisebenza ngabantu ngabodwana. Lokho wukuthi, ngabantu abanentshisekelo yokwenza ibhizinisi noma ukwenza inzuzo ethile ngubani banikela ngezabo izimoto ukuzenza zitholakale kubasebenzisi.
Abanikazi bakhetha intengo nokutholakala, futhi lapho bethola isicelo sokuqasha, bakhetha leyo abayibona ilula kakhulu ngokususelwa kuzintshisekelo zabo. Kamuva bayakuqinisekisa bese bathumela ikheli nemiyalo yokuqoqa imoto kumqashi.
Imoto njalo kufanele ibuyiswe ne ithangi ligcwele uphethiloli ngokuphelele (njengoba bekungesikhathi sokulethwa), futhi bebabili, umnikazi nomqashi, babheke isimo semoto ukuqinisekisa ukuthi akukho monakalo nomonakalo otholakalayo.
Isinyathelo esihlanganiswa ngabantu abaningi ngokwengeziwe abafuna ukuthola imali ethe xaxa.
Ukuthatha isinqumo sokuqasha imoto noma yiluphi uhlobo lwemoto phakathi nohambo lwethu kunezinketho ezibucayi zokuba yisinqumo esingeke sizisole ngaso.
Ekuqaleni, futhi uma sesinqume ukukwenza, singaba nemibuzo eyinkulungwane nokungabaza okuthile ezingqondweni zethu. Kodwa-ke, njengoba sesikufundile konke lokhu okungenhla, siyethemba ukuthi yonke le mibuzo iphenduliwe futhi ukungabaza kuqediwe.